March 6, 2020 - Myitter
ကျိုက်ထီးရိုးတောက်တက်ကား တိမ်းမှောက်မှုဖြစ် ကျိုက်ထို ဖေဖော်ဝါရီ(6)ရက် ဇေယျာဦး(ကျိုက်ထို) ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ယာဉ် အတက်ယာဉ်ညနေ (5 : 55)နာရီချိန်ခန်.က နောက်ပြန်လိမ့်ကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု.ဖြစ်ပွားခဲ.ကြောင်း (ကန)ဦး သတင်းသိရှိရသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက်ကားများဟာ မည်သည့်အခါကမှ တိမ်းမှောက်မှုမရှိကြောင်း သိရပါတယ်…..။ သတင်းအပြည့်အစုံကို ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမည်…..။ Nay La Yaung unicode ကြိုကျထီးရိုးတောကျတကျကား […]
ရွှေပြည်သာရှိစက်ရုံ၌ အလုပ်ရှင် ထွက်ပြေး၍ လုပ်သား ၄၆၀ ကျော် လစာမရ အခက်တွေ့
ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ Myanmar Royal Apollo အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် တရုတ်နိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်က လခမပေးဘဲ ထွက်ပြေးသွားသည့် အတွက် အလုပ်သမား ၄၆၀ ကျော် အခက်တွေ့နေရကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။ မစ္စတာလီ အမည်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများအား လစာရှင်းပေးရမည့် မတ်လ ၅ […]
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရေအောက်မှ ဆယ်တန်းကျောင်းသားလေး ရှာလို့တွေ့ပါပြီ…
ကျောင်းသားလေးရေအောက်မှရှာလို့တွေ့ပါပြီ… ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ဆယ်တန်းကျောင်းသား ရေနစ်သေဆုံး မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (မန္တလေးတိုင်း) Myanmar Rescue MDY Driver Team နှင့် လောကဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းတို့ ပူးပေါင်းလျက် စဥ့်ကူးမြို့နယ်…. ထုံးကြီးကျေးရွာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသား ရေနစ်သေဆုံးရာ Myanmar Rescue တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဌ […]
အိပ်မက်အရတူးဖော်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ …
အိပ်မက်ဆိုတာ လူတိုင်းမက်ဖူးကြပါတယ်…အိပ်မက်တွေက အတိတ်ကို ပြန်ပြီး မက်တာရှိသလို အနာဂတ်ကို ကြိုပြီးမက်တာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် အိပ်မက်နိမိတ်အဟောဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း မိမိမက်တဲ့ အိပ်မက်ရဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်… ခုလည်းပဲ အိပ်မက်အရ ရှေးဟောင်းလက်ရာမြောက် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… အဲတာကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့နယ် မင်းခေါင်ရွာမှာ […]
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင် ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားမရှိပါဘူး …
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားမရှိပါဘူး …ယောက်ျားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေပဲရှိတယ်… မိန်းမ စကားအရမ်းနားထောင်နေလို့ သင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့ အမည်တပ်ပေမယ့် ဘာကြောင့်လဲ သင့်မှာသင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့ သင့် သင်friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါ သင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေးတွေဇနီးအတွက်တော့ ယောက်ျားကောင်းဖြစ်နေမှာပါ… အချိန်တန် သင်နေမကောင်းအိုနာလာရင် သင့်ဇနီးနဲ့သင့်ကလေးတွေကပဲ သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်….မကောင်းတဲ့ friအများစုကတော့ သင့်ကိုမယားကြောက်လို့ အမည်တပ်လိမ့်မယ်….။ သင့်မိသားစုအတွက် […]
အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေတဲ့ အဖေကို သားဖြစ်သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ခေါ်သွားလိုက်သောအခါ ….
အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေတဲ့ အဖေကို သားဖြစ်သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ခေါ်သွားလိုက်သောအခါ အချိန်၃ မိနစ်လောက် ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေတဲ့ အဖေကို သားဖြစ်သူက စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်။ အဖေဖြစ်သူဟာ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေတာကြောင့် စားသောက်တဲ့အခါအစားအစာတွေဟာဘေးကိုဖိတ်စင်ကုန်တယ်။ အဖေရဲ့ဘောင်းဘီနဲ့အင်္ကျီတွေပေါ်မှာလဲပေကျံလို့နေခဲ့ပါတယ်။ တခြားဝိုင်းက လူတွေဟာအဖေဖြစ်သူကိုရွံရှာတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့နေပေမယ့် သားဖြစ်သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ […]
ရာစုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ဩဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာမှာ ဩဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီး အယောက် ၁၀၀ ကို ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်ဖော်ပြရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပါဝင်ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ အင်ဒီရာဂန္ဒီ၊ ကိုရာဇန်အာကွီနို၊ မာဂရက်သက်ချာ၊ ဟီလာရီကလင်တန်၊ အိန်ဂျလာမာကယ်၊ မီရှဲလ်အိုဘားမား […]
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ​ ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ် … ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော … ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့​ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ […]